DEG-DEG: Xidiga Kooxda Chelsea Ee Callum Hudson-Odoi Oo Xabsiga La Dhigay Iyo Laba Kiis Oo Midi Halis Yahay Oo Loo Haysto. – Gool24.Net
DEG-DEG: Xidiga Kooxda Chelsea Ee Callum Hudson-Odoi Oo Xabsiga La Dhigay Iyo Laba Kiis Oo Midi Halis Yahay Oo Loo Haysto.
Xidiga kooxda Chelsea iyo xulka qaranka England ee Callum Hudson-Odoi ayaa booliisku xabsiga u taxaabeen kadib markii uu jabiyay sharciga go’doonka ee caabuqa aduunka halakeeyay isla markaana uu 4:00 habeenimo uu khilaaf la galay gabadh model ah oo ay sheeko dhex martay.
Booliiska ayaa shaaciyay in gabadh ay dhibaato soo gaadhay ay soo wacday booliiska magaalada London iyo waliba gaadhiga gargaarka ee Ambulance-ka waxaana gabadhan loola cararay cisbtaalka halka Callum Hudson-Odoi xabsiga la dhigay.
Callum Hudson-Odoi oo ka soo kabsaday fayraska aduunka go’doonka galiyay ayaan casharkii soo maray waxba ka baran wuxuuna xili danbe u baxay gabadh kuwa dharka xayasiiya ah oo uu internetka ka bartay balse khilaaf dhex maray ayaa keenay in xaaladu xumaatay.
Saraakiisha Booliiska Metropolitan Police ayaa shaaciyay sababtii dhabta ahayd ee lagu soo xidhay xidiga kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi kaas oo isku darsaday laba danbi oo mid kastaaba uu dhibaato u keeni doono.
Arinta loo haysto Callum Hudson-Odoi ayaa dhacday xili danbe oo habeemadii xadii ahayd markaas oo ay 19 sano jirkan iyo gabadh dharka xayasiisa oo ay Online isku barteen uu khilaaf dhex maray.
Afhayeen u hadlay booliiska Metropolitan Police ayaa yidhi: “Booliiska London iyo gaadhiga gargaarka caafimaadka ee Ambulanceka ayaa la soo wacay Axadii 17 markii ay saacadu ahayd 357 daqiio waxaana soo dacwaysay gabadh aan xaalad fiican ku jirin”.
Markii ay gabadho soo dacwaysay Callum Hudson-Odoi waxay booliisku yimaadeen goobta waxayna booliisku xaqiiyeen in gabadhan cisbitaalka loola cararay isla markaana xabsiga loo taxaabay 19 sano jirka kooxda Chelsea ee Callum Hudson-Odoi.
Callum Hudson-Odoi waxa uu ku dhex jiraa laba kiis oo waa wayn oo kala ah in uu dhibaato u gaystay gabadha uu inernetka ka bartay iyo kiiska labaad oo ah in uu jabiyay go’doonkii farayska looga hortagayay.
Xaalada gabadha cisbtaalka la dhigay ee la filayo in uu jidh dilka u gaystay Callum Hudson-Odoi ayaan hadda la ogayn taas oo saamayn xun xidigan ku yeelan doonta haddii ay dhibaato noqoto mid sii waynaata.
Callum Hudson-Odoi oo ka soo kabsaday Fayraska aduunka ka yaabiyay ee Koronaha ayaa naftiisa markale halis galiyay balse kiiska ay booliisku u xidheen ayaa xaalada sii xumaynaya iyada oo lagu soo dhawaanayay waqtiga ay kooxaha Premeir League soo laabanayaan.
Wixii warar ah ee ka soo kordha kiiska loo xidhay Callum Hudson-Odoi waxaad kala socon doontaan wararkeena kale marka ay xog cusubi ka soo baxdo.